३३ केजी सुन प्रकरणमा माग्ने बुढा भन्छन , छानो चुहियो भन्दैमा तल बाट पिठोले टालेर हुन्दैन ,माथि बाट टायल हाल्नु पर्छ ,, – Ranga Darpan
३३ केजी सुन प्रकरणमा माग्ने बुढा भन्छन , छानो चुहियो भन्दैमा तल बाट पिठोले टालेर हुन्दैन ,माथि बाट टायल हाल्नु पर्छ ,,
वैशाख २० ,, साढे ३३ केजी सुन तस्करीमा नसोचेकै घटना र नसोचेकै सरकारी स्तरका कर्मचारी संलग्न भयको देख्दा सबैको चासोको विषय र आँखा तेतै छ।
लामो समयको अनुसन्धान पछि सरकारले ६३ जनालाई समायो र सामाजिक अपराध देखि सांगठानिक अपराधको मुद्दा दायर गरि कानुनि कार्बाही अगाडी बढायको छ।
६३ जनामा प्रहरी उपरिक्षक बरिस्ठ डिआईजि , डिएसपि , एसएसपी जस्ताको संलग्नता देखियो।
यसै विषयमा नेपाली चर्चित हास्य कलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढाले यौटा सानो
आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु भयको रैछ ।
तेस्लाई समाचारमा परिणत गर्ने मन लाग्यो , मनमा लागेको कुरा समाचार बनाउन मन लाग्यो ।
माग्ने बुढा केदार घिमिरेले अहिले आयर सामाजिक सुरक्षयामा लागेका छन् ।उनले आफुले कमायको केहि रकम पनि सामाजिक क्षेत्र र गरिब दुखिलाई बाँडने गरेका छन् । उनले लेखेकाछन् ,,
प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा पत्रकारलाई लात्ती बर्साएको भिडियो हेरियो। पुलिसले बर्साउने नै लात्ती हो, पुजारी हो र हरिओम् भनेर फुलपाती बर्साउन ? हल्का रमाईलो लागेन। सुन तस्करीमा राष्ट्रसेवकको मिलेमतोको प्रशङ्ग रहेछ।— हिजो हामी छोराको कलेज गएका थियौं।
श्रीमती सीताले साठी हजार तिरीन र अमिलो अनुहार पार्दै फर्केर भनिन ” अझै पचास हजार तिर्न बाँकी रहेछ। बाटोमा फर्किदा गफ गर्दै आयौं ” सामान्य जागीर खाने इमान्दार कर्मचारीलाई बाॅच्न गाह्रो छ” । कालो बजारी मौलाएपछी,लुटतन्त्र जागेपछी अन्तिम बिकल्प शायद “बैमानी ” नै हो ।
मर्नु भन्दा बौलाउनु निको। महॅगी नियन्त्रण भएन भने शायद हात टेबल मुनि जान मन गरीरहन्छ। जब सम्म समाजले “आर्थिक सम्ब्रिद्दीलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको आधार ” मान्दछ यस्ता टनका टन सुन भित्रिरहन्छन्। सुनमा,नुनमा,चुनमा,भुटुनमा जेमा हुन्छ लुंड्याऊ ।
मेरो आशय भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने पटक्कै होईन । बरु “भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने तत्वहरु केके हुन ? त्यता तिर ध्यान दिनु जरुरी छ” भन्ने हो । छाना चुहियो भने तलबाट पिठोले टालेर हुदैन,माथिबाट टायल फेर्नुपर्छ।
साढे ३३ किलो काण्डमा पनि खेताला, भरिया , गोठाला , चालकहरुलाई मात्र बलिको बोका नबनाई सुन साहु , सुन महाजनहरुलाई पनी बलिको खसी बनाउनेकी ? सुन मालिक रहेसम्म अर्को खेताला खोजेर भएपनि ओसार्ने काम त जारी रहन्छनी होइन र? गल्ति लेखेको भए माफ पाॅउ है हजुर।
रङ्ग दर्पण 8772 posts0comments
साढे ३३ केजी सुन तस्कर प्रहरीका एसएसपी देखि डिआईजी बाटै गायब २ जनाको हत्या ,,
मोदी नेपाल आउँदा प्रदेश २ मा सार्वजानिक विदा ,,,
वैशाख २५ ,गोरखा- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडान.५ लाकुरीबोटमा कोरोना संक्रमितको लागि निर्माण हुन लागेको अक्सिजन सहितको आईसोलेसनमा…